Nezvedu - Wuxi Flyt Nyowani Energy Technology Co, Ltd.
Isu takazvipira kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogutsa masevhisi.
Wuxi Flyt Nyowani Energy Technology Co, Ltd., inyanzvi inogadzira madiki uye epakati-saizi yemhepo turbine masisitimu uye akakodzera zvishongedzo. Isu tanga tichiita yekutsvagisa uye nekushandisa madiki emhepo turbines kubva100w-50kw kwemakore mazhinji. Nzvimbo yakakura yekugadzira inovhara nharaunda ye1000 mita metres iri muWuxi guta, Jiangsu Province, makiromita zana nemakumi maviri kubva kuShanghai uye makiromita mazana maviri kubva kuNanjing, ine ruzha rwekufambisa network yemvura, nzira yakajeka, njanji nendege kutenderedza.
Kambani yedu ikozvino ine huwandu hwakawanda hwevashandi vehunyanzvi, zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye zvekuyedza, kunyanya tunnel yemhepo iyo inogona kuumba mamiriro anodikanwa ekuvandudza uye kuyedza zvigadzirwa uye pamusoro pemakore yakagadzira yakasanganiswa sisitimu yekugadzira, kugadzira, kushambadzira, kuisa, kugadzirisa dambudziko uye mushure-kutengesa. Mhepo turbines ndeyeEC, ISO yakasimbiswa uye akati wandei patent inokudzwa. Sole-muridzi wepfuma kurudyi uye kubatana kwakazara nemusika wepasi rose unotaura nezvehunhu, kuvimbika nekusimudzira kwezvigadzirwa zvedu. Tine zvirongwa zvemhepo turbine kwese kuChina nekune dzimwe nyika izvo zvese zvinogamuchirwa zvakanaka.
Chirevo chedu chemishoni
Isu tiri vagadziri vezvigadzirwa zvitsva nekukurumidza.
Isu tinopa nzira yekusimbiswa kwevakagadzira zvigadzirwa;
Tiri vagadziri kupa mwero hwaro.
Isu tinorega mutengi anzwe ruzivo rwakakwana rwekugadzira, kuvabatsira kuti vabudirire kukosha kwayo.
Tichava vakanyatsozvipira zvizere kuvandudza kugutsikana kwevatengi, nekuwedzera huwandu hwevatengi.
danho rekutanga, akashinga mukushandisa
hunhu uye hunoshanda
Hwevatengi hwehunhu hunhu hupenyu hwekambani, zvakare hwakakosha pane iyo yega mushandi.Toita zvese zvatinogona kuti tiite kugutsikana kwevatengi vese, kuitira kuti yega odha iite zvakakwana.
Chengetedza pfungwa dzakavhurika, mazano matsva, ongorora nzira nyowani, ramba uchidarika.
Chengetedza hunyanzvi kuzvipira, kushandira pamwe, kwakanaka kushandira, ive indasitiri piyona.
Ramba uchivandudza, gadzira chigadzirwa chemhando yepamusoro kupfuura zvinotarisirwa nevatengi.
Kusimudzira kugona, inoramba ichikurumidza kupindura kune zvinodiwa nevatengi.
Tora mutengi senzvimbo yepamusoro, kusimudzira bhizinesi senzvimbo yekutanga, zvichibva pamubhadharo wevashandi, uchienderera mberi nekuvandudza mhando yebasa revatengi, kupa nzvimbo yakakura yekuvandudza kune vashandi vebhizinesi, kuzadzisa mutengi, bhizinesi, vashandi kuhwina- kuhwina- kukunda mamiriro.